Published August 19, 2020 at 10:33 PM CDT
Ardaydu waxay baran doonaan shaqsi ahaan laba maalmood usbuucii, iyo guriga labada kale. Macallimiintu waxay joogi doonaan dhismahooda Arbacada si ay u caawiyaan ardayda haddii loo baahdo. Waaxda Iowa ee Waxbarashada ayaa ogolaatay qorshaha.
Degmooyin dhowr ah oo ku yaal waqooyi-galbeed Iowa waxay ku dhow yihiin marinka loo baahan yahay si loogu oggolaado degmo dugsiyeedyada inay codsadaan ka dhaafis si ay u aadaan barashada internetka oo dhan.
Afayeen u hadlay Iowa Gov. Kim Reynolds ayaa sheegay in gobolka uu saxaayo cillad weyn oo ku saabsan xogteeda coronavirus taas oo dib u dhigtay kumanaan natiijooyin tijaabo ah oo togan iyo mid taban.
Pat Garrett wuxuu sheegay in nidaamka macluumaadka gobolka uu si khaldan u duubay natiijooyinka dadka la tijaabiyay dhowr jeer. Wuxuu yiri natiijada qofkii ugu dambeeyay, ha ahaato mid togan ama mid xun, “waxaa si ula kac ah loogu aaneeyey taariikhda imtixaankoodii ugu horreeyay.” Taasi waxay ka dhigan tahay kumanaan natiijooyin dhowaan la diiwaan geliyay nidaamka ah inay ka dhacday Maarso, Abriil, Meey iyo Juun.
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa hadda bixinaynin warbixinno maalinle ah oo ku saabsan Kiisaska COVID-19 ee cusub ee Gobolka Woodbury ka dib markii ay jiraan walaac ku hareeraysan nidaamkaas warbixinta gobolka.
Gobolkii Iowa ayaa meel mariyay taariikh la taaban karo Arbacadii. In kabadan 1000 Iowan ah ayaa u dhintey dhibaatooyin laxiriira COVID-19, 16 in kabadan 24 saac. Waxa jiray 600 oo kiis oo cusub oo ay soo sheegeen Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Iowa sidoo kale.
Dhanka kale, Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota waxay diiwaangelisay laba tijaabo oo togan oo dheeri ah oo dhan 1,929 oo dhan. Tirada dhimashada ayaa weli ah 42.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotaGovernor Kim ReynoldsDr. Paul GausmannewsCOVID-19SomaliDakota County Health Department
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey sagaal kale oo dheeri ah oo gobolka ah oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka ka dhashey COVID-19.…